Tazonin’Ireo Akanjo Mena Ho Velona Ny Fahatsiarovana Ireo Vehivavy Aborizena Tsy Hita Sy Maty Novonoina Tao Kanadà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Novambra 2015 7:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, 日本語, 한국어, English
Anisan'ny Tetikasa REDress ireo fitafiana, fametrahana zavakanto iray hisarihana saina mikasika ny tsy rariny. Manodidina ny 1.200 eo ho eo ireo vehivavy Aborizena novonoina na nanjavona nanomboka ny taona 1980, araka ny Royal Canadian Mounted Police (mpitandro filaminana mitaingin-tsoavaly). Raha 4,3%-n'ny vehivavy Kanadiana monja no Aborizena, nanome ny 16%-n'ireo vehivavy novonoina nanerana an'i Kanadà ireo vehivavy Aborizena niharan'ny famonoana olona.
Ny 4 Oktobra 2015, niangavy ireo vehivavy hanolotra akanjo mena iray avy i Jamie Black, mpamorona ny Tetikasa, hanantona akanjo iray eo ivelan'ny tranon'izy ireo na hiakanjo izany mihintsy amin'io andro io. Tamin'ny Twitter, teo ambanin'ny tenifototra #REDressProject, nanangona ireo sary mampihetsim-po mikasika ireo akanjo, ireo olom-pirenena manerana an'i Kanadà mba ho toy ny fahatsiarovana ireo vehivavy Aborizena Kanadiana izay nesorina ny ainy.
Ireo akanjo mena mihantona ao an-tobin'i Ryerson ho fanomezam-boninahitra ireo vehivavy indizena nanjavona sy novonoina. #REDressproject pic.twitter.com/h6QqCMfHXG
#mmiwg notsarovan'ny #redressproject: ireo akanjo 9 eo ivelan'ny fiantsonan'ny fiarandalamby ao Main St ny 18 Oktobra teo #sistersinspirit pic.twitter.com/YesCbq9ZfE
Fanehoana ny fisiana amin'ny alalan'ny marika milaza tsy fisiana. #MMIW #REDressProject pic.twitter.com/cZB0aRYnQP
te-hijanona ireo akanjo – hiandry ary hisisika hitaky ny rariny mikasika ireo vehivavy novonoina #MMIW #REDressProject pic.twitter.com/wFmIM6d4KX
Teny an-dalana hody aho nahamarika akanjo mena iray amin'ny trano iray misy varavarana vitsivitsy. Ave Lajoie #Outremont #MMIW #REDressProject #elxn42
I Black, ny tenany izay mpikambana rahateo ao amin'ny vondrom-piarahamonina vazimba Safiotra, no nanomboka ny tetikasa REDress ny taona 2010, niara-niasa tamin'ny Ivon-toeran'ny Oniversiten'i Winnipeg ho any Vehivavy sy ny Fampianarana Miralenta tamin'izany fotoana, mba hanehoana ireo akanjo mena manodidina ny 100 tao anatiny sy teny ivelan'ny trano fonenan'ny mpianatra. Fanomezana avy amin'ireo olona manodidina ny firenena avokoa ireo akanjo sady avy aminà kolontsaina samihafa.
Na teo aza ireo isa mila herisetra mampisafoaka natao tamin'ireo vehivavy Aborizena tao Kanadà, maro no mbola tsy mahalala ireo loza mbola misy amin'izao. Linda Nothing, izay nanampy tamin'ny fikarakarana ny fananganana ny tetikasa tao Calgary, no nanazava tamin'ny tafatafa tao amin'ny Metro News fa:
Ny tetikasa REDress dia fanentanana amin'izao fotoana izao ao amin'ny The Acadia University Art Gallery hatramin'ny 29 Novambra. Azonao arahana ao amin'ny pejy Facebook ofisialy ny fanavaozam-baovaon'ilay tetikasa.